Galmudug oo Dhalinyaro u Tababareysa Xalinta Khilaafaadka – SOMALI RADIO ONAIR
Galmudug oo Dhalinyaro u Tababareysa Xalinta Khilaafaadka
March 10, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Galmudug oo kaashanaysa Safaaradda dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb tababar ugu furtay lixdan dhallinyaro ah.
Tababarkan oo ku saabsan sidii dhallinyarada loogu diyaarin lahaa ka shaqeynta nabadda iyo faham ka qaadashada habka loo maro xallinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ayaa socon doona muddo shan maalmood ah.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug, Maxamed Nuur Diini ayaa dhallinyarada ku boorriyay in ay faham fiican ka qaataan tababarka si xal loogu helo isku-dhacyada soo laalaabtay ee reer miyiga iyo shaqaaqooyinka inta badan ka dhex dhaca bulshada.
Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo Siyaasadda magaalada Dhuusamareeb, Cabdi Xaashi ayaa sheegay in dhallinyarada ay door muuqda ka qaataan mar walba amniga iyo xasilloonida bulshada, wuxuuna ku baaqay in lasii ballaariyo tababarrada noocan oo kale ah.
Maamulka Gobolka Banaadir oo u digay Dadka Isticmaala maandooriyaha
Dhageyso: Maamulka Gobolka Gedo oo ku baaqay in la bilaabo doorashada kuraasta Garbahaareey